Vaovao - andalana R&D an'ny andian-tsarin'i Rainpoo
Andalana R&D an'ny andiana vokatra Rainpoo
Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fiantraikan'ny halavan'ny fifantohana amin'ny valin'ny modeling 3D, azonao atao ny mahazo fahatakarana mialoha ny fifandraisana misy eo amin'ny halavan'ny focal sy ny FOV. Manomboka amin'ny fametrahana ny masontsivana manidina mankany amin'ny fizotran'ny modeling 3D, dia misy hatrany ny toerany ireo masontsivana roa ireo. Ka inona no vokatr'ireo masontsivana roa ireo amin'ny valin'ny modelina 3D? Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantarinay ny fomba nahitan'i Rainpoo ny fifandraisana amin'ny fizotry ny vokatra R&D, sy ny fomba hahitana fifandanjana eo amin'ny fifanoherana eo amin'ny haavon'ny sidina sy ny vokatry ny maodely 3D.
1 、 Manomboka amin'ny D2 ka hatramin'ny D3
RIY-D2 dia vokatra namboarina manokana ho an'ny tetik'asa fanadihadiana momba ny cadastral. Izy io ihany koa no fakantsary tranainy indrindra izay mampiasa haingo latsaka sy ambany. D2 dia manana fahamendrehana maodely avo lenta sy kalitao maodely tsara, izay mety amin'ny modeling amin'ny sehatra amin'ny tany fisaka fa tsy gorodona loatra. Na izany aza, ho an'ny fidinana lehibe, ny tany sarotra sy ny topografia (ao anatin'izany ny tsipika misy herinaratra avo lenta, ny fivoaran-tsetroka, ny tobim-piantsonana ary ny tranobe avo hafa), ny fiarovana ny sidina an'ny drôna dia ho olana lehibe.
Amin'ny fiasa marina, ny mpanjifa sasany dia tsy nikasa ny hahavon'ny sidina tsara, izay nahatonga ny drone hanantona tsipika misy herinaratra avo na hidona amin'ny tobin'ny toby; Na na dia tsara vintana aza ny drôna sasany namakivaky ireo toerana mampidi-doza, dia hitan'izy ireo fa tena akaiky an'ireo toerana mampidi-doza ireo drôna rehefa nizaha ny sary an'habakabaka .. Ireo loza sy loza mitatao ireo dia matetika miteraka fatiantoka be amin'ny mpanjifa.
Toerana fijanonana miorina amin'ny sary, hitanao fa manakaiky ny drôna izy io, mety hitifitra Noho izany, mpanjifa maro no nanome sosokevitra antsika: Azo atao ve ny manao fakan-tsary lavareny lavareny mifangaro mba hametrahana ny haavon'ny sidina ho ambony kokoa ary hahatonga ny sidina ho azo antoka kokoa? Miorina amin'ny filan'ny mpanjifa, mifototra amin'ny D2, dia namolavola kinova lava lava nifantohany antsoina hoe RIY-D3. Raha ampitahaina amin'ny D2, amin'ny vahaolana mitovy amin'izany, D3 dia afaka mampitombo ny haavon'ny sidina amin'ny 60% eo ho eo.
Nandritra ny R&D an'ny D3, nino foana izahay fa ny halavan'ny halava lava dia mety manana haavon'ny sidina avo kokoa, ny kalitaon'ny maodely tsara kokoa ary ny fahamendrehana avo kokoa. Saingy taorian'ny fiasa tena izy dia hitanay fa tsy araka ny nampoizina izany, ampitahaina amin'ny D2, ny maodely 3D namboarin'i D3 dia somary tery, ary ny fahombiazan'ny asa dia somary ambany ihany.
Anarana Riy-E2 / D3
lafiny 190 * 180 * 88mm
Karazana sensor APS-C
CMOS habe 23.5mm × 15.6mm
Haben'ny pixel 3.9um
Pikantsary tanteraka 120MP
Ny elanelam-potoana fampandrenesana Mininum 1s
halava mifantoka 20mm / 35mm ho an'ny D235mm / 50mm ho an'ny D3
Herin'aratra Famatsiana fanamiana (Power by drone)
fahaizan'ny fahatsiarovana 320G
Ny fampidinana data dia nandrora ≥70M / s
Hafanan'ny asa -10 ° C ~ + 40 ° C
Fanavaozana ny mikirao praogramanao Tsy andoavam-bola
Tahan'ny IP IP 43
2, ny fifandraisana misy eo amin'ny halavan'ny fifantohana sy ny kalitaon'ny maodely
Ny fifandraisana misy eo amin'ny halavan'ny vava sy ny kalitaon'ny maodely dia tsy mora ho takatry ny ankamaroan'ny mpanjifa, ary na dia maro aza ireo mpanamboatra fakantsary mivaingana dia mino fa diso ny mason-tsivana lava lava manampy ny kalitaon'ny modeling.
Ny tena zava-misy eto dia: amin'ny hevitra fa mitovy ny masontsivana hafa, ho an'ny endrika fananganana, arakaraky ny halavan'ny halavan'ny vava, ny ratsy fitoviana. Karazana fifandraisana lojika inona no tafiditra eto?
Tamin'ny artikaly farany Ny fiantraikan'ny halavan'ny fifantohana amin'ny valin'ny modeling 3D niresaka izahay fa:
Raha ny fiheverana fa mitovy ny masontsivana hafa, ny halavan'ny afovoan-tany dia hisy fiantraikany amin'ny haavon'ny sidina ihany. Araka ny aseho eo amin'ilay sary etsy ambony, misy masom-pifandraisana roa tsy mitovy, ny mena dia manondro ny masom-pifantohana lava, ary ny manga manondro solomaso fohy fohy. Ny zoro faran'izay avo noforonin'ilay mason-tsivana lava sy ny rindrina dia α, ary ny zoro farafahakeliny namboarin'ilay solomaso fohy ary ny rindrina dia β. Mazava ho azy fa:
Inona no dikan'io "zoro" io? Arakaraka ny maha lehibe ny zoro eo anelanelan'ny sisin'ny FOV amin'ilay solomaso sy ny rindrina, dia vao mainka mihombo ny masom-bidy mifandraika amin'ny rindrina. Rehefa manangona ny mombamomba ny fananganana endrika, ny masom-pifandraisana fohy dia afaka manangona ny mombamomba ny rindrina kokoa, ary ireo maodely 3D miorina amin'izany dia afaka manome taratra tsara kokoa ny firafitry ny tarehy. Noho izany, ho an'ny seho misy tarehy, ny fohy kokoa ny halavan'ny lens, ny manankarena kokoa amin'ny fampahalalana voaangona ary ny hatsaran'ny modely.
Ho an'ireo tranobe misy atiny, eo ambanin'ny famolavolana mitovy amin'ny tany, arakaraky ny halavan'ny halavan'ny lens, ny haavon'ny haavon'ny sidina, ny habetsaky ny jamba eo ambanin'ny atiny, vao mainka ho ratsy ny kalitaon'ny maodely. Ka amin'ity scenario ity dia tsy afaka mifaninana amin'ny D2 ny mason-tsivana lava D3 miaraka amina masom-potoana fohy kokoa.
3 、 Ny fifanoherana eo amin'ny haavon'ny sidina sy ny kalitaon'ny maodely 3D
Raha ny fifandraisan'ny lojika ny halavan'ny fifantohana sy ny kalitaon'ny maodely, raha ny halaviran'ny masomaso dia fohy dia fohy ary ny zoro FOV dia ampy lehibe, tsy ilaina fakan-tsary misy fakan-tsary mihitsy. Ny solomaso misy zoro tena lehibe (zoro maso-trondro) dia afaka manangona ny mombamomba ny làlana rehetra. Araka ny aseho etsy ambany:
Tsy mety ve ny mamolavola ny halavan'ny masomaso ho fohy araka izay tratra?
Tsy lazaina intsony ny olan'ny fanodikodinana lehibe ateraky ny halaviran-tany fohy dia fohy. Raha toa ka 10mm ny halavan'ny halavan'ny fakantsary ortho an'ny fakan-tsary mivalona ary angonina amin'ny valiny 2cm ny angon-drakitra, 51 metatra fotsiny ny haavon'ny sidina.
Mazava ho azy, raha toa ka misy fakantsary miringiriny natao hananana asa ity drone ity dia azo antoka fa hampidi-doza izany.
PS: Na dia voafetra ihany aza ny fampiasana ny seho amin'ny maodely fakana sary miavaka ny masom-pakantsary feno zoro, dia misy dikany azo ampiharina amin'ny maodely Lidar. Talohan'izay, orinasa Lidar malaza iray no nifampiresaka taminay, nanantena anay hamolavola fakan-tsarimihetsika misy habakabaka misy zoro malalaka, nitaingina an'i Lidar, ho an'ny fandikana zavatra amin'ny tany sy ny fanangonana firafitra.
4 、 Manomboka amin'ny D3 ka hatramin'ny DG3
Ny R&D an'ny D3 dia nahatonga anay hahatsapa fa ho an'ny fakana sary madiodio, ny halavan'ny afovoany dia tsy azo atao lava be na fohy. Ny halavany dia mifandray akaiky amin'ny kalitaon'ny maodely, ny fahombiazan'ny fiasa, ary ny haavon'ny sidina. Ka ao amin'ny R & D solomaso, ny fanontaniana voalohany tokony hodinihina dia ny: ahoana no hametrahana ny halavan'ny tarika?
Na dia manana kalitao maodely tsara aza ny fifantohana fohy, saingy ambany ny haavon'ny sidina, tsy azo antoka izany amin'ny sidina drôna. Mba hiantohana ny fiarovana ny drôna, ny halavan'ny fifantohana dia tsy maintsy noforonina lava kokoa, fa ny halavan'ny fifantohana lava kosa dia hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny asa sy ny kalitaon'ny maodely. Misy fifanoherana iray eo amin'ny haavon'ny sidina sy ny kalitaon'ny maodely 3D. Tsy maintsy mitady marimaritra iraisana eo amin'ireo fifanoherana ireo isika.
Ka taorian'ny D3, mifototra amin'ny fandinihana lalina ireo anton-javatra mifanohitra ireo dia novolavolainay ny fakantsary DG3 oblique. DG3 dia mihevitra ny kalitaon'ny modeling 3D an'ny D2 sy ny haavon'ny sidina D3, ary koa manampy ny rafitra fanalefahana ny hafanana sy ny fanala vovoka, mba hahafahana ampiasaina amin'ny drôna voafetra na VTOL ihany koa. DG3 no fakantsary malaza be mpampiasa ho an'ny Rainpoo, izy koa no fakantsary mihetsika be mpampiasa eny an-tsena.
lafiny 170 * 160 * 80mm
Haben'ny CCD 23.5mm × 15.6mm
Ny elanelam-potoana fampandrenesana Mininum 0.8s
halava mifantoka 28mm / 40mm
fahaizan'ny fahatsiarovana 320 / 640G
Ny fampidinana data dia nandrora ≥80M / s
5 、 Avy amin'ny DG3 ka hatramin'ny DG3Pros
Ny fakantsary RIY-Pros serliera dia afaka mahatratra kalitao maodely tsara kokoa. Ka inona no famolavolana manokana ananan'i Pros eo amin'ny famolavolana ny lens sy ny halavany ifantohany? Amin'ity olana ity dia hanohy hampiditra ny lojika famolavolana ao ambadiky ny masontsivana Pro izahay.
6, zoro solomaso oblique sy kalitaon'ny modeling
Ny atiny teo aloha dia nilaza izany fomba fijery izany: ny fohy kokoa ny halava mifantoka, ny lehibe kokoa ny zoro ny fijery, ny bebe kokoa ny fananganana fampahalalana facade azo angonina, ary ny tsara kokoa ny maodely modely.
Ankoatry ny fametrahana halavan'ny fifantohana mety dia mazava ho azy fa afaka mampiasa fomba hafa hanatsarana ny vokatry ny maodely ihany koa isika: ampitomboy mivantana ny zoro an'ireo lantopy mivalona, ​​izay afaka manangona vaovao misimisy kokoa momba ny tarehy ihany koa.
Fa raha ny tena izy, na dia mety manatsara ny kalitaon'ny maodely aza ny fametrahana zoro misavoana lehibe kokoa, dia misy ihany koa ny vokany roa:
1: Hihena ny fahombiazan'ny asa. Miaraka amin'ny fitomboan'ny zoro misavoana dia hitombo be koa ny fanitarana ny làlan'ny sidina. Rehefa mihoatra ny 45 ° ny zoro miavaka amin'ny 45 °, dia hidina mafy ny fahombiazan'ny sidina.
Ohatra, ny fakantsary faktiora an'habakabaka Leica RCD30, ny zoro miavaka dia 30 ° fotsiny, iray amin'ireo antony mahatonga an'ity famolavolana ity ny fampitomboana ny fahombiazan'ny asa.
2: Raha lehibe loatra ny zoro misavoana dia hiditra mora foana amin'ny fakan-tsary ny tara-pahazavana, ka hanjelatra (indrindra amin'ny maraina sy tolakandro amin'ny andro manjombona). Ny fakan-tsarimihetsika Rainpoo oblique no voalohany nanangana ny endrika anatiny-lens. Ity famolavolana ity dia mitovy amin'ny fampidirana hood amin'ny lantia mba hisorohana azy tsy ho tratry ny hazavan'ny masoandro.
Indrindra ho an'ny drôna kely, amin'ny ankapobeny, dia somary mahantra ny fihetsiky ny sidina. Rehefa tapitra ny zoro mivalona sy ny toetran'ny drôna dia afaka miditra mora foana amin'ny fakantsary ny fahazavana mania, manamafy ny olan'ny famirapiratana.
7, kalitao mifampitohy sy ny kalitaon'ny maodely
Araka ny traikefa, mba hiantohana ny kalitaon'ny maodely, ho an'ny zavatra rehetra eny amin'ny habakabaka, dia tsara kokoa ny manarona ny fampahalalana momba ny firafitry ny sokajy dimy mandritra ny sidina.
Mora azo izany. Ohatra, raha te-hanamboatra maodely 3D an'ny tranobe taloha isika, ny kalitaon'ny modelin'ny sidina faribolana dia tokony ho tsara lavitra noho ny kalitaon'ny fakana sary vitsivitsy fotsiny amin'ny lafiny efatra.
Arakaraka ny maha-rakotra sary azy ireo, ny mombamomba ny spatial sy ny firaketana ao anatiny, ary ny hatsaran'ny modely. Ity no dikan'ny zotra misidina amin'ny zotram-piaramanidina ho an'ny fakana sary miavaka.
Ny ambaratongan'ny tso-drano dia iray amin'ireo antony lehibe mamaritra ny kalitaon'ny maodely 3D. Amin'ny sehatra ankapobeny amin'ny fakana sary miavaka, ny tahan'ny mifanindry matetika dia 80% ary 70% ny sisiny (miverimberina ny tena angon-drakitra).
Raha ny marina dia tsara kokoa ny manana ambaratonga mifanindry ihany amin'ny sisiny, fa ny tampoka ambony loatra kosa dia hampihena be ny fahaizan'ny sidina (indrindra ho an'ny drôna maharitra), noho izany, miorina amin'ny fahombiazany, ny ambany mifanila amin'ny ankapobeny dia ho ambany noho ny mitobaka ny lohateny.
Torohevitra: raha dinihina ny fahombiazan'ny asa, ny diplaoma mifindrafindra dia tsy avo araka izay azo atao. Rehefa avy nihoatra ny "fenitra" iray manokana, ny fanatsarana ny diplaoma mifono dia misy fatra voafetra amin'ny maodely 3D. Raha ny fijerinay ny fanandramana dia indraindray hampihena ny kalitaon'ny maodely ny fampitomboana ny overlap. Ohatra, ho an'ny sehatry ny famolavolana vahaolana ho an'ny 3 ~ 5cm, ny kalitaon'ny maodely ho an'ny diplaoma ambany mifanindry indraindray dia tsara kokoa noho ny diplaoma mifampitohy avo kokoa.
8 、 Ny tsy fitoviana misy eo amin'ny overlap theoretical sy ny tena overlap
Alohan'ny sidina dia nametraka lohateny 80% izahay ary 70% mifanila amin'ny sisiny, izay ilay overlap teorika fotsiny. Amin'ny sidina dia hisy fiatraikany amin'ny drôna ny drôna,ary ny fiovan'ny toe-tsaina dia hahatonga ny tena mifanindry ho ambany noho ny fanitsakitsahana teorika.
Amin'ny ankapobeny, na drone multi-rotor na elatra raikitra io, ny maharatsy ny fisian'ny sidina, no maharatsy ny kalitaon'ny maodely 3D. Satria ny drôna multi-rotor na elatra voafetaka kely kokoa dia maivana kokoa noho ny halavany ary kely kokoa ny habeny, dia mora voan'ny fitsabahan'ny rivotra avy any ivelany izy ireo. Ny toe-tsain'izy ireo amin'ny ankapobeny dia tsy dia tsara loatra raha oharina amin'ny drôna antonony / lehibe na ratra maharitra, ka miteraka ny mari-pahaizana mifanindry amin'ny faritra sasany izay tsy dia ampy, izay misy akony amin'ny kalitaon'ny maodely.
9 、 Fahasarotana amin'ny fanaovana maodely 3D an'ny trano avo
Rehefa mihabe ny haavon'ny trano dia hitombo ny fahasahiranan'ny maodely 3D. Ny iray dia ny trano avo be dia hampitombo ny mety hisidinan'ny drôna, ary ny faharoa dia rehefa mihabe ny haavon'ny trano, dia mitotongana mafy ny fifampitambaran'ny faritra avo lenta, ka miteraka maodely tsy dia tsara an'ny maodely 3D.
1 Ny fiantraikan'ny fitomboan'ny firongatry ny 3D Ny kalitaon'ny modely amin'ny tranobe avo lenta
Ho an'ny olana etsy ambony, mpanjifa efa za-draharaha maro no nahita vahaolana: mampitombo ny haavon'ny fifandonana. Eny tokoa, miaraka amin'ny fitomboan'ny haavon'ny fifandimbiasana dia hihatsara tanteraka ny vokatr'ilay modely. Ity manaraka ity dia fampitahana ny andrana nataonay:
Amin'ny alàlan'ny fampitahana etsy ambony, dia ho hitantsika fa: ny fitomboan'ny haavon'ny fifandimbiasana dia tsy misy akony firy amin'ny kalitaon'ny maodelin'ny trano ambany ambany; fa misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny modelin'ny trano avo be.
Na izany aza, rehefa mihabetsaka ny haavon'ny fifandimbiasana dia hitombo ny isan'ny sary an'habakabaka ary hitombo koa ny fotoana hikarakarana ny angona.
2 Ny fitaoman'i halava mifantoka amin'ny 3D Ny kalitaon'ny modely amin'ny tranobe avo lenta
Nanatsoaka hevitra toy izany izahay tamin'ny atiny teo aloha:Fa fananganana tarehy 3D ny maodely fanaovana modely, arakaraky ny halavan'ny halava mifantoka no maharatsy ny maodely kalitao. Na izany aza, ho an'ny maodely 3D amin'ny faritra avo lenta dia ilaina ny halavan'ny fifantohana lava kokoa mba hiantohana ny kalitaon'ny maodely. Araka ny aseho etsy ambany:
Eo ambanin'ny fepetra mitovy amin'ny mari-pahaizana sy ny diplaoma mifampitohy, ny masom-potoana lava halava dia afaka miantoka ny haavon'ny tampon'ilay tampon-trano sy ny haavon'ny sidina azo antoka hahazoana ny kalitaon'ny modeling avo kokoa.
Ohatra, raha ny fakantsary DG4pros oblique dia ampiasaina hanaovana maodely 3D an'ny trano avo lenta, tsy vitan'ny hoe hahatratra ny kalitaon'ny maodely tsara izy io, fa ny tena marina dia mety hahatratra hatrany hatrany amin'ny 1: 500 takiana amin'ny fanadihadiana cadastral, izay tombony ho an'ny lavitra ifantohana lantipoà lava.
Case: Tranga iray mahomby amin'ny fakana sary miavaka
Fakan-tsary mihetsika 10 、 RIY-Pros
Mba hahatratrarana kalitao maodely tsara kokoa, eo ambanin'ilay fanapahan-kevitra mitovy, ilaina ny miantoka ny fifandimbiasana ampy sy ny sehatry ny fahitana. Ho an'ny faritra misy fahasamihafana amin'ny velaran-tany midadasika na tranobe avo lenta, ny halavan'ny solomaso ihany koa singa iray manan-danja izay misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny maodely. Miorina amin'ireo fitsipika voalaza etsy ambony, ny fakan-tsary mihetsika Rainpoo RIY-Pros dia nanao izao fanatsarana telo izao tamin'ny solomaso:
1 Manova ny fisehon'ny lenSes
Ho an'ny fakantsary Pro serizika Pro, ny fahatsapana mora indrindra dia ny fiovan'ny endriny avy amin'ny boribory mankany amin'ny toradroa. Ny antony mivantana indrindra an'ity fanovana ity dia satria niova ny firafitry ny lens.
Ny tombony azo avy amin'ity lamina ity dia ny haben'ny fakantsary azo noforonina mba ho kely kokoa ary ny lanjany dia mety ho maivana kokoa. Na izany aza, io fisehosehoana io dia hiteraka ny ambaratonga mifanindry amin'ireo lantina havia havia sy havanana ho ambany noho ny an'ny fomba fijery aloha, afovoany ary aoriana: izany hoe, ny faritra misy ny aloka A dia kely kokoa noho ny faritra aloky B.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, mba hanatsarana ny fahombiazan'ny sidina, ny mifanila amin'ny sisiny dia mazàna kely noho ny overlap ny lohateny, ary ity "layout manodidina" ity dia hampihena bebe kokoa ny sisin-tany mifanila, ka izay no mahatonga ny maodely 3D any aoriana ho mahantra kokoa noho ny lohateny 3D modely.
Ka ho an'ny andian-dahatsoratra RIY-Pros, Rainpoo dia nanova ny firafitry ny solomaso ho: layout mitovy. Araka ny aseho etsy ambany:
Ity layout ity dia hahafoy ny ampahany amin'ny endrika sy ny lanjany, fa ny tombony azo dia ny miantoka ny sisiny mifanety sy hahatratra kalitao maodely tsara kokoa. Amin'ny drafitra sidina tena izy, ny RIY-Pros dia afaka mampihena ny sisin-tany mihodina aza hanatsarana ny fahaizan'ny sidina.
2 Amboary ny zoro ny oblique LenseS
Ny tombony amin'ny "layout parallèle" dia ny fiantohana ny fifandimbiasana ampy fotsiny, fa ny fampitomboana ny sisin'ny FOV ary ny fanangonana fampahalalana bebe kokoa momba ny tranobe.
Noho io antony io, nampitomboinay ihany koa ny halavan'ny tarehin-tavy mivalona ka ny sisiny ambany dia nifanindry tamin'ny sisin'ny faravodinanan'ny "layout manodidina" teo aloha, nampitombo kokoa ny fijerin'ny zoro, araka ny aseho amin'ity sary manaraka ity:
Ny tombony an'ity fisehosehoana ity dia na dia miova aza ny zoro ny lantina mivalona dia tsy misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny sidina. Ary aorian'ny fanatsarana be ny FOV an'ny lantia an-daniny dia azo angonina ny angona fampahalalana misimisy kokoa, ary azo hatsaraina mazava ho azy ny kalitaon'ny maodely.
Ny fanandramana mifanohitra dia mampiseho ihany koa fa, raha oharina amin'ny fomban-drazana nentin'ireo lantom-peo, dia afaka manatsara ny kalitaon'ny sideways ny maodely 3D ny fametrahana ny andian-dahatsoratra Pros.
Ny ankavia dia ny maodely 3D namboarin'ny fakan-tsary mahazatra, ary ny ankavanana dia ny maodely 3D namboarin'ilay fakan-tsary Pros.
3 Ampitomboy ny halavan'ny fotony lantiro mivalona
Ny lantina fakantsary fakantsary RIY-Pros dia novaina avy amin'ny "layout manodidina" ho "layout parallel", ary hitombo ihany koa ny tahan'ny famahana ny teboka akaiky amin'ny sary lavitra nalain'ny solika.
Mba hahazoana antoka fa ny tahan'ny tsy mihoatra ny sanda fanakianana dia nitombo 5% ~ 8% ny halavan'ny maso mitongilana ambony noho ny teo aloha.
Anarana Riy-DG3 Pros
lafiny 130 * 142 * 99.5mm
halava mifantoka 28mm / 43mm
fahaizan'ny fahatsiarovana 640G